AM Security System - China AM Security System nokutengesa,Chigadzirwa - Kujekesa
Zvimwe Zvekuchengetedza Zvigadzirwa
musha » Solutions » Zvigadzirwa zveEAS » Eas System
katoni saizi: 170*50*12masendimita
chiputiriso: 1bv / ctn,24KG,0.1CBM
Eas hurongwa anoshanda kubva nyore musimboti pasinei mugadziri chaiyo mhando zvigadzirwa kushandiswa kana: wokutepfenyurisa anotumira chiratidzo dzimwe frequencies kunorondedzerwa kuti mugamuchiri. Izvi zvinoitawo kuti ongororo nharaunda, chinowanzoitirwa paImba Checkout mukana kana pokubuda napo munyaya chitoro zvitoro. Paakapinda nharaunda, mumwe chipepa kana chitaridzi chaizvo unhu anosika nyonganyonga, ndiko kuona nokuda mugamuchiri. Chaiwo huchashandiswa chipepa kana chitaridzi kuchambokanganisa chiratidzo chinhu pachena chikamu akasiyana Eas gadziriro. Semuyenzaniso, Tags kana zvisiri anogona kuchinja chiratidzo nokushandisa nyore Semi-kondakita Junction (kuvakwa chinhu chinogumbura inokosha imwe mudunhu Integrated), munhu zvirire redunhu raiumbwa ane inductor uye capacitor, nyoro rinobva rinoparadza kana waya, kana vibrating resonators.
By zvakagadzirwa huchaita chiratidzo akasikwa kubudikidza chipepa uye kuona nokuda mugamuchiri ndiye nevamwe uye kwete zvichida vasikwa dzinongoitika ezvinhu. The chipepa ndiyo chaikosha, nokuti zvinofanira kuumba rakasiyana chiratidzo kudzivisa okuzvidzivirira venhema. The nyonganyonga iri paindaneti kwezvakatipoteredza yakakonzerwa chipepa kana chitaridzi pave musaridzisa ezvinhu kuti kazhinji chinoratidza munhu shoplifting kana kubvisa munhu akadzivirirwa chinhu kubva nharaunda.
Hunhu mabikirwo dzokwenyu sei rakafara riri mbudo / pamukova mukana kungava. Hurongwa dziripo kuti pabutiro kubva nepaburi mukana kusvikira navanopinda kumashopu chitoro yokutanga. Saizvozvowo, rudzi zvemichina kunokanganisa kudekara kudzivirirwa (ichivharira kana detuning chiratidzo), kuti maonero uye kukura chipepa, mwero okuzvidzivirira venhema, kuti chikamu vasabatwa exchange (nonga zvazvingava), uye mutengo.
The Physics imwe Eas chipepa zvichiguma Eas Michina anosarudza iyo Frequency siyana inoshandiswa kusika ongororo nharaunda. Eas hurongwa siyana pasi chaizvo frequencies kuburikidza redhiyo Frequency siyana. Saizvozvowo, izvi frequencies siyana basa rinokosha mune pave zvinhu kuti chokuita oparesheni.
2.13 padiki Frozen
Infrared Vanhu Kuteedzera
EAS Detector & Locker
Pini / Lock / Coil / Ferrite
Gorofu Club Tag
Mukaka Unogona Kuchengeteka
Chengetedzo Display Hook
Chengetedzo Yekutenga Bhegi
Ratidza Chengetedzo Yakamira
adhiresi: mukana 803, chivakwa 1, Prona Bhizinesi Plaza, Aihwa. 2145 Jinshajiang Road, Putuo Dunhu, Shanghai